Momba anay - Beijing Ca-Long Engineering Machinery Co., Ltd.
Ca maharitra Engineering Machinary Co., Ltd. dia orinasa mpiara-miombon'antoka kanadiana izay manampahaizana manokana amin'ny R&D sy ny famokarana masinina an-dalambe efa 20 taona. Ny mari-pamantarana antsika dia voasoratra tany Sina, Rosia ary faritra hafa. Ny vokatra lehibe dia misy ny zava-maniry mifangaro asfalta mijanona (manomboka amin'ny 56 t / h ka hatramin'ny 600 t / h), ny zavamaniry fampifangaroana asphalt (avy amin'ny 80 t / h ka hatramin'ny 160 t / h), ny zavamaniry mifangaro (avy amin'ny 60 m3/ ora hatramin'ny 180 m3/ h), zavamaniry fampifangaroana tany / simenitra, planina fikosoham-bary mangatsiaka, paompy betonika tarihiny, milina famindrana asfalta, ary fitaovam-pitaterana asphalt Guss ary fitaovana fitaterana sns
Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2006, ny vokatra Ca-long dia aondrana any Sri Lanka, Azerbaijan, Russia, Mongolia, Kenya, Uganda ary Saudi Arabia sns. Tsy amin'ny tsena sinoa ihany, fa koa amin'ny tsena ampitan-dranomasina, miaraka amin'ny sandan'ny fanoloran-tena ho lavorary & azo ekena fanompoana? ny orinasa dia tsy tapaka hanomezana vokatra ambony sy serivisy tsara ho an'ny mpanjifa manerantany.
2014. Vokatra vaovao, fitaovana finday ho an'ny fanodinana fako.
2013.Nalefaina tamin'ny zavamaniry aspira voalohany Est-CL-3000. Ny vokatray niditra tao amin'ny tsena Eoropeana.
2012. Ny orinasa dia nanadihady sy namolavola vokatra vaovao: mixer beton, paompy beton.
2010.Nanomboka ny asa fanamarinana ny vokatra. Tamin'ny taona 2011, ny zavamaniry Ca-Long Asphalt dia nahazo mari-pankasitrahana CE mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra avo lenta sy ny fiarovana avo lenta.
2009. Tao amin'ny Beijing BICES Exhibition Company dia nampiranty ny zavamaniry fampifangaroana aspalta lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny fahafaha 600t / h.
2009. Nanangana tobim-panamboarana vaovao ao amin'ny Zone Industrial Matou, izay mirefy 24 hektara.
2008. Navoaka ho any Rosia ny andiany voalohany an'ny zava-maniry asphalt.
2007. Nalefazana ny setrin'ny zavamaniry asphalt voalohany CL-1500 mankany Sri Lanka.
2006. Ny orinasa dia namokatra ny andiany voalohany amin'ny fametahana asphalt fampifangaroana zavamaniry miaraka amin'ny fahafaha-400t / h, ny maodely dia CL-5000.
2004. Nifindra avy tany Handan nankany Beijing ny orinasa ary nanangana ny Beijing Ca-Long Engineering Machinary Co., Ltd.Miorina 46000 metatra toradroa ny fotodrafitrasa any Beijing.
2001.Nampiditra vola Kanada ary nanangana orinasa mpiara-miombon'antoka Ca-Long Engineering Machinery Co., Ltd. (Handan). Nohatsaraina ny refin'ny orinasa sy ny fahaizany mamokatra.
1995. Namolavola rafitra fanaraha-maso solosaina indostrialy vaovao, izay napetraka tamin'ny zavamaniry asfalta sinoa marobe.
1989. Nahomby tamin'ny famolavolana sy ny fandefasana ny rafitra fandanjana elektronika zavamaniry asfalta, ary nanomboka famokarana betsaka ny mizana elektronika.
1986. Nahomby ny fampandrosoana ny rafitra fanaraha-maso zavamaniry aspalto. Nahazo ny mari-pankasitrahana teknolojia breakthrough an'ny Hebei Administration Administration.
Fanamarinana ho an'ny vokatra fiarovana ny tontolo iainana
Fanamarihana momba ny orinasa teknolojia avo lenta sy vaovao
Fiarovana amin'ny indostrialy Burner
Orinasa TOP 500 Shina manondrana any Russia